Dia mampiaraka ny Rindrambaiko oharina: Ny tsara indrindra Mampiaraka Soratra - volana - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Misy tena maro fanampiny modules, ary afaka mahita ny Mombamomba ny hafa Feso sehatra.
Ny rohy ny lehibe sy ny vavahadin-tserasera Bilaogy toy ny Facebook, YouTube, Flickr, Plente offic, ny Lalao, ny WordPress sy ny Twitter-ny dia mahafinaritra.
Izany dia maimaim-poana, raha mbola mijery amin'ny faram-pejy Rohy Boome.
Misy ihany koa ny Enterprise Dikan-Feso ho an'ny $ vitsivitsy fanampiny endri-javatra, ny fahazoan-dalana, sy ny Fanohanana.
Hafa maimaim-poana ny Fiarahana amin'ny Rindrambaiko no Daty.
Izany dia manome be dia fisafidianana ny endri-javatra izay na ny sasany amin'ireo "hividy rindrambaiko" outperforms. Toy izany Daty isaky ny mandray ny fahafahana maimaim-poana na ara-barotra Mampiaraka-sehatra. Ireto ny sasany ny asa toy izany ny Daty ny Topimaso Ny nahira-tsaina Misokatra Isa vahaolana. Toy ny amin'ny maro Misokatra Isa Soratra, misy maro ny Fiaraha-monina ny webmasters miaraka aminao raha ny olana, fifanakalozana afaka. Mahafinaritra Ajax-monina, ny fandaharana amin'ny naorina-in "Fiainana Faharoa" izao tontolo izao.
Afaka mametraka fiteny maro fonosana
Ireto lafin-Javatra sasany. Ny Fivoriana dia tsara hoatr'izany vokatra avy any Angletera. Izany ny avy ao amin'ny free Iombonana sy ny tolotra rehetra ny faneva endri-javatra ny ny Fiarahana amin'ny Rindrambaiko. Ireto misy vitsivitsy ao amin'ny Ankapobeny. Vlada mpiasa Manolotra ny fiasàna sain'ny fonosana tanteraka, anisan'izany ny fiainana ela Fanohanana, maimaim-poana ny Fanavaozam-baovao ho an'ny isan-taona, maimaim-poana ny Fametrahana, free Fampiantranoana, ary ny vola indray antoka. Koa, izany dia tsara tarehy koa voaro amin'ny mpijirika (araka izay mandeha). Manolotra ny bunch ny endri-javatra. Eto isika hilaza afa-tsy vitsivitsy.
Web Daty dia hita toy ny fototra dikan-misy ary afaka modules ny sasany fanampiny ho maharitra.
Ny sakafo interface tsara toa milamina sy misy ny mandeha ho azy ny fanaraha-maso ny spam.
Ireto ny sasany ny lafiny mampiavaka ny Rindrambaiko.
Mampiaraka script no tena tsara tarehy sy ny fikarohana optimisé Mampiaraka. Ny Mpanelanelana amin'ny tontolo Version maimaim-poana.
Ny Rindrambaiko mahatonga ihany ny Palatinum Dikan ' ny mahafinaritra sy misy dikany.
Ny asa isan-karazany dia manolotra ny zava-drehetra dia tokony hitondra ny Fiarahana amin'ny Rindrambaiko.
mifanena mandritra ny fotoana iray- Te-hihaona amin'ny vehivavy Aho te hihaona aminao tsy misy lahatsary amin'ny chat maimaim-poana amin'ny aterineto ny lahatsary fampidirana amin'ny chat roulette fisoratana anarana ankizivavy ny Fiarahana amin'ny aterineto tsy misy video maimaim-poana tsy an-kanavaka manaitaitra ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana ny Fiarahana amin'ny fifandraisana